म यो क्याबिनेटमा जान्नँ : प्रभू साह गृहपृष्ठसमाचारअर्थअन्तर्राष्ट्रियखेलकुदमनोरन्जनअन्तरवार्तासमाजफोटो फिचरसम्पर्क	You are here: Homeअन्तरवार्ताअन्तरवार्ताम यो क्याबिनेटमा जान्नँ : प्रभू साह म यो क्याबिनेटमा जान्नँ : प्रभू साह Written by Yatra Daily
Tuesday, 16 August 2016 08:01	Rate this item
माओवादी केन्द्रको हेडक्वार्टरले तयार पारेको मन्त्री सूचीमा नेता प्रभू साहको नाम थियो । तर आइतबारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा उनी परेनन्, किन ? बसन्त बस्नेतले गरेको संक्षिप्त वार्ता :
मन्त्री बन्ने प्रस्ताव किन अस्वीकार गर्नुभएको ?
म मन्त्री बन्ने चर्चा पार्टीमा कसले सुरु गर्‍यो, थाहा भएन । मसँगै बरु सल्लाह गरेको भए हुन्थ्यो । अध्यक्षले भेटेर ‘तपाईंको अपेक्षा के छ ?’ भनी सोध्दा पनि मैले अरू कुरा राखिनँ । ‘तपाईंले फेरि देशको नेतृत्व गर्ने मौका पाउनुभएको छ, यो अप्ठ्यारो समयमा जोखिम मोल्न लाग्नुभएकाले म निसर्त सहयोग गर्छु’ भनें । मनमा शंका भने थियो– अध्यक्ष प्रचण्डले देशको निकास र संविधानको कार्यान्वयनका लागि जोखिम मोल्नुभएको हो कि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि चलाखीमात्रै । आजको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हेरेपछि थाहा भयो, यो शुभ लक्षण होइन । त्यसैले म नगएको ।
किन, मन्त्रिपरिषद् कसरी विस्तार भयो र ?
यो देशको चिन्ताभन्दा पनि गुटवाद र झुन्डको व्यवस्थापन गर्ने किसिमबाट गयो । सबैलाई थाहा छ, म प्रचण्डसँग निरन्तर फरक मत अनि असहमति राख्दै भए पनि पार्टी पद्धतिमा विश्वास गर्दै आएको मानिस हुँ । तर यहाँ असहमति राख्नेलाई विश्वास गर्ने परिपाटी बनिसकेको रहेनछ ।
तपाईंले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अपेक्षा गर्नुभएको थियो ?
अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा मेरो भूमिका के हुन सक्छ भन्ने बारेमा कुराकानी भएकै थियो । संविधान निर्माणदेखि नै संघीयताको माग सम्बोधन भएन भन्ने मधेसी समुदायको गुनासो छँदै छ । म मधेसी समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको नेता भएका कारणले पनि मधेसलाई चित्त बुझाउने गरी प्रभावकारी संवाद गर्ने, स्थानीय चुनाव सफल पार्ने वातावरण बनाउने अवस्था बन्ने थियो । त्यो जिम्मेवारी नपाउने भएपछि अरू पदमा गएर केवल मन्त्रीका लागि मन्त्री बन्नुभन्दा बरु म समितिमै सभापति छँदै छु । यहींबाट पनि योगदान गर्न सक्छु भनेर गइनँ ।
कानुन मन्त्रालय अफर गरिएको थियो । किन नजानुभएको ?
कुन मन्त्रालयमा जानेभन्दा पनि देशको चिन्ता लिएर समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने कुरा मुख्य हो नि । सरकार त हिजो पनि थियो, तर मैले हिजोदेखि नै एउटा लाइन लिएको थिएँ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा हाम्रो पार्टी हुँदा पनि राजनीतिक समस्या समाधान नहुने देखिएकै थियो । तर अहिले सम्भावना होला कि भनी उत्साहित भएको थिएँ । अब त्यो अवस्था बन्ने नदेखिएपछि किन मन्त्रीका लागि मन्त्री बन्ने भनेर नगएको हो । सार्थक र परिणाममुखी भूमिकाका लागि मेरो खोजी थियो ।
मन्त्रिपरिषद् त फेरि पनि विस्तार हुनेवाला छ । फेरि पनि अर्को सुविधाजनक भूमिका पाउने अवस्था भएमा मन्त्री बन्नुहोला नि ?
म यो क्याबिनेटमा जान्नँ । देशभन्दा गुट प्राथमिक बन्ने अवस्थामा मैले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नैपर्छ ।
कान्तिपुरबाट Read 578 times	Last modified on Tuesday, 16 August 2016 08:05	Tweet
« भारतसँग हाम्रो बहुआयामिक सम्बन्ध छ – दिपेन्द्र झा, अधिवक्ता	पराधीनता समाधानको प्रस्थानबिन्दु - ओमप्रकाश खनाल »